Mabasa 27 - Bhaibheri Dzvene [Shona Bible SCLB] - (Mab 27)
Pazvakanga zvarongwa kuti tinofanira kuenda kuItari nechikepe, vakaisa Pauro navamwe vasungwa mumaoko aJuriasi aiva mutungamiriri wezana wechikwata chamasoja chokwaAgasitosi.
Takakwira chikepe chokuAdhiramitimu chakanga chava kuda kuenda kumaguta okumahombekombe eAsia. Takatangisa kufamba nechikepe tichiperekedzwa naAristakusi mugari wokuMasedhonia aibva kuTesaronika.
Pazuva rakatevera takandomisa chikepe paSidhoni. Juriasi akabata Pauro zvakanaka. Akamupa mvumo yokuenda kushamwari dzake kuti dzimuwanise zvokurarama nazvo.
Takabvapo tikaenda tiri kurutivi runoenda mhepo rweSaipurasi nokuti mhepo yanga yakatarisana nesu.
Patakanga tadimura gungwa riri parutivi peSirisia nePamupfuria takasvika kuMira muRisia.
Ikoko mutungamiri wezana akawana chikepe chokuArekizandiria chaienda kuItari akatikwidza machiri.
Takafamba nechikepe zvishoma nezvishoma mazuva akati kuti tikasvika, kuKinidhosi zvokutovavarira. Mhepo zvaisina kutibvumira kuenderera mberi, takatofamba tiri kunoenda mhepo kweKiriti tiri pedyo neSarimoni.
Takafamba pedyo namahombekombe ayo zvokutovavarira. Takazosvika kune imwe nzvimbo inonzi Maturiroakanaka iri padyo neguta rinonzi Rasea.
Sezvatakanga tarasikirwa nenguva yakawanda uye rwendo zvarwakanga ruine njodzi uye nokuti nguva yokutsanya yakanga yapfuura, Pauro akavapa zano achiti,
“Madzichangamire, ndirikuona kuti rwendo rwedu ruchava nokukuvara uye nokurasikirwa kukuru kwete nenhumbi nechikepe chete asiwo noupenyu hwedu.”
Asi mutungamiriri wezana akateerera kune zvemutungamiriri wechikepe nomuridzi wechikepe kupinda zvaitaurwa naPauro.
Pamusanawo pokuti panomirira zvikepe pakanga pasingaiti kupedzera nguva yechando varipo, ruzhinji rwakasarudza kuti vabvepo vaende, vachiti zvimwe, vangadaro vakakwanisa kusvika kuFonikisi, nzvimbo inomirwa nezvikepe zveKiriti yakatarisa kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva uye kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kuti tigopedzera nguva yechando tiriko.
Pakafefetera kamhepo kanobva kumaodzanyemba vakafunga kuti vawana zvavakanga vachida vakasimudza zvinorema zvokumisisa chikepe vakafambisa chikepe vachitevedza Kiriti vari pedyo namahombekombe.
Asi pakarepo dutu rinonzi mhepo yokuchamhembe kwakadziva kumabvazuva yakarova ichidzika ichibva nokuKiriti ikoko.
Chikepe chakahwetsurwa chikatadza kukunda mhepo tikabva tangoregerawo zvakadaro ndokubva tavakungoendeswa.
Takamhanya tiri kwakadzivirwa mhepo nakatsuwa kanonzi Kaudha. Takakwanisa kusungirira igwa zviri zvokutovavarira kwazvo.
Vakarikakatira mukati. Vakaita kuti chikepe chinyatsosimba nokusungirira tambo napasi pacho. Pamusana pokutya kuti vangangopinda mujecha ramahombekombe eSiritisi vakaderedza zvinofambisa chikepe, ndokungosundwa zvachowo.
Nenzira yokuti takanga tichitomhotswa — tomhotswa zvinotyisa ramangwana acho vakatangisa kukanda zvinhu panze.
Pazuva retatu vakakanda panze namaoko avo, zvimwe zvokushandisa pakufambisa chikepe.
Kuzoti kwaita mazuva akawanda pasingambooneka zuva kana nyenyedzi, iro dutu richitivhuvhuta zvakaomarara takanga tangobatira ura mumaoko tongoti ndiko kwavakupera uku.
Sezvo vakanga vagara kwenguva ndefu vasina chokudya Pauro akauya mberi pakati pavo akati, “Varume mungadai makanditeerera makarega kubva kuKiriti uye mungadai musina kupinda mukukuvara uku nokurasikirwa uku.
Ndinokukurudzirai kuti tsungai mwoyo nokuti hapana achafa pakati penyu kusiya kurasikirwa nechikepe,
nokuti ihwo husiku hwanhasi uhu mutumwa waMwari wangu wandinonamata
akamira pedyo neni akati, ‘Usatye Pauro, unofanira kundomira pamberi paSiza. Chinzwa Mwari akupa vose vauri kufamba navo nechikepe.’
Naizvozvo tsungai mwoyo varume nokuti ndine chivimbo muna Mwari chokuti zvichangoitika sezvandaudzwa.
Asi tichanonzi njo pane chimwe chitsuwa.”
Kuzoti hwava usiku hwegumi nehwechina pataive tichingonzi suku nasai mugungwa reAdhiria pavakunge pakati pousiku vafambisi vechikepe vakafungidzira kuti vava kusvika kumahombekombe.
Vakaera namaungira vakaona mvura iri mamita makumi matatu namanomwe. Vangoti endei pamberi zvishomanana vakaerazve namaungira vakaona kuti yakanga yava mamita makumi maviri ana manomwe.
Pamusana pokutya kuti tingangoroverere pamabwe vakaburitsa zvimwe zvinorema zvokumisisa chikepe zvina necheshure kwechikepe vachinamata kuti dai kwangoedza.
Vafambisi vechikepe pavaiedza kutsvaga nzira dzokutiza nadzo muchikepe, vatodzikisa igwa mugungwa nechemberi kwechikepe vachiita sokunge vari kudzikisa zvinorema zviya zvokumisisa nazvo chikepe,
Pauro akati kumutungamiri wezana nokumasoja, “Varume ava vakarega kuramba vari muchikepe hamumbopona.”
Masoja akadimbura tambo dzegwa vakarirega richienda zvaro.
Mambakwedza, Pauro akavakurudzira vose kuti vadye achiti, “Nhasi izuva regumi nechina makabatira ura mumaoko musina chokudya pasina chamadya.
Nokudaro ndinokukumbirisai kuti mudye. Zvichakupai simba nokuti hapana noruvhudzi rwomusoro waani naani zvake wenyu ruchatsakatika.”
Paakanga ataura izvi akatora chingwa ndokutenda kuna Mwari pamberi pavo vose akachimedura akatangisa kudya.
Vakabva vakurudzirwa vose vakadya chokudya.
Takanga tiri mazana maviri anamakumi manomwe ana vanhu vatanhatu.
Pavakanga vaguta vakarerutsa chikepe nokutokanda koroni mugungwa.
Zvino kwakati kwaedza havana kugona kuziva kuti inyika ipi asi vakaona nzvimbo yaigona kumira chikepe yaiva nejecha pamahombekombe pavakafunga kundosvitsa chikepe kumahombekombe ikoko.
Naizvozvo vakadimbura zvinorema zvokumisa chikepe nazvo zviya, vakazvisiya mugungwa vachibva vasunungurawo tambo dzakanga dzakasunga zvokunangisa nazvo chikepe. Vakabva vasimudza machira echikepe epamberi akadziva kunobva mhepo. Vakabva vananga kunzvimbo yaigona kumira chikepe kuya.
Vakaroverera chikepe pachiturunhuru chejecha pasi pegungwa ndokubva chikepe chati pfe mujecha ndiye mbetete chisisakwanisi kuzunguzika. Besu rechikepe rikabva ratyorwa tyorwa namasaisai.
Pfungwa yamasoja yakanga yava yokuti vauraye vasungwa vose kuti varege kushambira vagotiza nokupunyuka.
Asi mutungamiri wezana, pamusana pokuda kuponesa Pauro, akarambidza kuita zvavainge vafunga. Akati avo vanokwanisa kushambira vatange ndivo kusvetukira panze vagoshambira vachienda kunyika.
Vamwe vose vozoendawo, vamwe vakabatirira pamapuranga kana pane zvimwe zvidimbu zvechikepe. Nenzira iyoyi vose vakasvika pamahombekombe zvakanaka.
Mabasa 1 / Mab 1
Mabasa 2 / Mab 2
Mabasa 3 / Mab 3
Mabasa 4 / Mab 4
Mabasa 5 / Mab 5
Mabasa 6 / Mab 6
Mabasa 7 / Mab 7
Mabasa 8 / Mab 8
Mabasa 9 / Mab 9
Mabasa 10 / Mab 10
Mabasa 11 / Mab 11
Mabasa 12 / Mab 12
Mabasa 13 / Mab 13
Mabasa 14 / Mab 14
Mabasa 15 / Mab 15
Mabasa 16 / Mab 16
Mabasa 17 / Mab 17
Mabasa 18 / Mab 18
Mabasa 19 / Mab 19
Mabasa 20 / Mab 20
Mabasa 21 / Mab 21
Mabasa 22 / Mab 22
Mabasa 23 / Mab 23
Mabasa 24 / Mab 24
Mabasa 25 / Mab 25
Mabasa 26 / Mab 26
Mabasa 27 / Mab 27
Mabasa 28 / Mab 28